ဒီဂီယာရဲ့ နေရာ အစားထိုးနိုင်မယ့်ဂိုးသမားက ပစ်ဖို့ဒ်ဖြစ်လာမလား
Jordan Pickford ဟာ David De Gea ရဲ့ နေရာကို တကယ်ပဲ အစားဝင်နိုင်မယ့်သူလား
19 Nov 2018 . 12:47 PM
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း လှုပ်ခတ်နေတာက မန်ယူဂိုးသမား ဒီဂီယာ David De Gea ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်ပြီး မန်ယူအသင်းရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီဂီယာကိုသာ လက်လွှတ်ခဲ့ရရင် အဆင်သင့်အစားထိုးနိုင်အောင် မန်ယူအသင်း ဂိုးသမားသစ်တစ်ဦး ရှာဖွေနေပြီး အဲဗာတန်ဂိုးသမား ပစ်ဖို့ဒ် Jordan Pickford ကို မျက်စိကျနေတယ်လို့လည်း သိရတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့်လို့ တင်စားရမယ့် ပစ်ဖို့ဒ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဒီဂီယာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မှတ်တမ်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီမှာ ဒီဂီယာနဲ့ ပစ်ဖို့ဒ်တို့ဟာ သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေအတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ဒီဂီယာက (၄၉)ပွဲ၊ ပစ်ဖို့ဒ်က ပွဲ(၅၀)ကစားခဲ့တယ်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လကနေ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလအထိ ဒီဂိုးသမားနှစ်ဦးရဲ့ ဂိုးပေါက်ကာကွယ်မှု အကြိမ်က (၁၅၇)စီနဲ့ အတူတူဖြစ်နေတာပါ။
ဒါပေမဲ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီရဲ့ Performance ကို ကြည့်ရင် ပစ်ဖို့ဒ်ကတောင် နည်းနည်းသာနေသလိုပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက စလို့ ပစ်ဖို့ဒ်ရဲ့ ပယ်နယ်တီကာကွယ်မှုက (၃)ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး ဒီဂီယာကတော့ တစ်ကြိမ်မှ မရှိခဲ့ဘူး။ အမြင့်ဘောတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှုမှာလည်း ပစ်ဖို့ဒ်က (၂၂)ကြိမ်၊ ဒီဂီယာက (၁၇)ကြိမ်သာ ရှိခဲ့ပြီး ပစ်ဖို့ဒ်က (၅)ကြိမ် ပိုများခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးကို ပုတ်ထုတ်ကာကွယ်နိုင်မှု အပိုင်းမှာလည်း ပစ်ဖို့ဒ်က ပြတ်ပြတ်သားသား အသာရခဲ့ပြီး (၂၃)ကြိမ်အထိ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီဂီယာကတော့ (၁၀)ကြိမ်သာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအရ ပစ်ဖို့ဒ်ဟာ မန်ယူအသင်းရဲ့ နံပါတ်(၁)ဂိုးသမားဖြစ်လာဖို့ အလားအလာအကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ အသက်(၂၄)နှစ်သာ ရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိနေသလို ဒီအသက်အရွယ်အရလည်း ဘောလုံးလောကမှာ နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကြာတဲ့အထိ ကျင်လည်နိုင်ဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။ ပစ်ဖို့ဒ်ရဲ့ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးက ပေါင်သန်း(၆၀)အထိ ရှိပေမယ့် တကယ်လို့ မန်ယူအသင်းသာ ဒီဂီယာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ပစ်ဖို့ဒ်အတွက် အသုံးပြုရမယ့်ငွေတွေဟာ အလဟဿ မဖြစ်ဘူးလို့ပဲ ဆိုပါရစေ . . .
Photo:The Sun,FOX Sports Asia,
Jordan Pickford ဟာ David De Gea ရဲ့ နရောကို တကယျပဲ အစားဝငျနိုငျမယျ့သူလား
အခုရကျပိုငျးအတှငျး လှုပျခတျနတောက မနျယူဂိုးသမား ဒီဂီယာ David De Gea ရဲ့ အနာဂတျဖွဈပွီး မနျယူအသငျးရဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ ကမျးလှမျးမှုကို ပယျခဖြို့ ရှိနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျနတေယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီဂီယာကိုသာ လကျလှတျခဲ့ရရငျ အဆငျသငျ့အစားထိုးနိုငျအောငျ မနျယူအသငျး ဂိုးသမားသဈတဈဦး ရှာဖှနေပွေီး အဲဗာတနျဂိုးသမား ပဈဖို့ဒျ Jordan Pickford ကို မကျြစိကနြတေယျလို့လညျး သိရတယျ။ ဒါကွောငျ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ကွယျပှငျ့လို့ တငျစားရမယျ့ ပဈဖို့ဒျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ ဒီဂီယာရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ မှတျတမျးကို နှိုငျးယှဉျကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီမှာ ဒီဂီယာနဲ့ ပဈဖို့ဒျတို့ဟာ သကျဆိုငျရာအသငျးတှအေတှကျ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ရခဲ့ပွီး ဒီဂီယာက (၄၉)ပှဲ၊ ပဈဖို့ဒျက ပှဲ(၅၀)ကစားခဲ့တယျ။ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးတာ ၂၀၁၇ သွဂုတျလကနေ ၂၀၁၈ နိုဝငျဘာလအထိ ဒီဂိုးသမားနှဈဦးရဲ့ ဂိုးပေါကျကာကှယျမှု အကွိမျက (၁၅၇)စီနဲ့ အတူတူဖွဈနတောပါ။
ဒါပမေဲ ကဏ်ဍတဈခုခငျြးစီရဲ့ Performance ကို ကွညျ့ရငျ ပဈဖို့ဒျကတောငျ နညျးနညျးသာနသေလိုပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက စလို့ ပဈဖို့ဒျရဲ့ ပယျနယျတီကာကှယျမှုက (၃)ကွိမျရှိခဲ့ပွီး ဒီဂီယာကတော့ တဈကွိမျမှ မရှိခဲ့ဘူး။ အမွငျ့ဘောတှကေို ကာကှယျနိုငျမှုမှာလညျး ပဈဖို့ဒျက (၂၂)ကွိမျ၊ ဒီဂီယာက (၁၇)ကွိမျသာ ရှိခဲ့ပွီး ပဈဖို့ဒျက (၅)ကွိမျ ပိုမြားခဲ့တယျ။ နောကျတဈခုဖွဈတဲ့ ဘောလုံးကို ပုတျထုတျကာကှယျနိုငျမှု အပိုငျးမှာလညျး ပဈဖို့ဒျက ပွတျပွတျသားသား အသာရခဲ့ပွီး (၂၃)ကွိမျအထိ ကာကှယျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဒီဂီယာကတော့ (၁၀)ကွိမျသာ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီအခကျြတှအေရ ပဈဖို့ဒျဟာ မနျယူအသငျးရဲ့ နံပါတျ(၁)ဂိုးသမားဖွဈလာဖို့ အလားအလာအကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျရမယျ။ အသကျ(၂၄)နှဈသာ ရှိပမေယျ့ သူ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက ထိပျတနျးအဆငျ့မှာ ရှိနသေလို ဒီအသကျအရှယျအရလညျး ဘောလုံးလောကမှာ နောကျထပျ ဆယျစုနှဈ တဈခု ကွာတဲ့အထိ ကငျြလညျနိုငျဦးမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ပဈဖို့ဒျရဲ့ ဈေးကှကျပေါကျဈေးက ပေါငျသနျး(၆၀)အထိ ရှိပမေယျ့ တကယျလို့ မနျယူအသငျးသာ ဒီဂီယာကို ဆုံးရှုံးလိုကျရမယျဆိုရငျ ပဈဖို့ဒျအတှကျ အသုံးပွုရမယျ့ငှတှေဟော အလဟဿ မဖွဈဘူးလို့ပဲ ဆိုပါရစေ . . .